what, when, why: कम्प्युटर सम्बन्धी रमाइलो ट्रिक्सहरु
कम्प्युटर सम्बन्धी रमाइलो ट्रिक्सहरु
अब एक छिन रमाइलो Tricks ट्राइ गरेर हेरौ , तपाईंले यि tricks को प्रयोग गरेर आफ्नो साथी भाई माझ Smart बन्न सक्नु हुन्छ ।
Microsoft Word मा यस्तो किन हुन्छ
Bill Gates लाई पनि थाहा छैन कि Word मा किन यस्तो हुन्छ तपाईं पनि एक चोटि आँफै ट्राइ गरेर हेर्ने कि ?
१ Microsoft Word खोल्नुहोस्
२ त्यहा तल लेखिएको टेक्स्ट लाई कपि गरी पेस्ट गरिदिनुहोस्
३ अब Enter हान्नुहोस् ।
४ हेर्नुहोस् के हुन्छ ....
सक्नु हुन्छ ? एक चोटि ट्राइ गरेर हेर्नुहोस् न त
अब तपाईंले आफ्नो साथीहरुलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस् कि तपाईंले माथि उल्लेखित नामको फोल्डर बनाएर देखाउनु हुन्छ ।